Ingxoxo ngophuhliso oluphezulu kumgangatho ophakathi wamayeza
Ixhaswe ngumbutho we China Chemical Industry Association kwaye yenziwa yi Zouping Mingxing Chemical Co, Ltd., isemina kuphuhliso olukumgangatho ophezulu lweshishini eliphakathi lamayeza ebibanjelwe eDezhou, kwiPhondo lase Shandong. Umxholo wale nkomfa uthi “ukutshintshiselana ngemida, ukuhlanganisa ...
Umgca wemveliso esizisebenzelayo ophambi kwethu ngumgangatho wemveliso ekrelekrele owenziwe waphuculwa kwaye waguqulwa yiZouping Mingxing Chemical Co., Ltd. ngotyalo-mali lwe-yuan yezigidi ezili-100 kulo nyaka. Okwangoku, iimveliso zeekhemikhali zifakwe kwimveliso kwiibhetshi. Ngokomaneja jikelele ...
Ukunyuka kwamaxabiso abaphumeleleyo be-API kwikota yesithathu kuye kwatsala umdla omkhulu
Ukuphuhliswa kwemveliso ye-API kunye noshishino lwamachiza ahlukanisekanga, kwaye ayingqinelani. Kuyaqondakala ukuba ngenxa yokongamela okungqongqo okungqongqo, abavelisi be-API kufuneka bandise inkqubo okanye banciphise isikali semveliso phantsi kweemeko zokuqala, eziza ...